Dagaal u Dhaxeeya Puntland iyo Al-shabaab oo ka Qarxay Gobolka Nugaal – Radio Daljir
Dagaal u Dhaxeeya Puntland iyo Al-shabaab oo ka Qarxay Gobolka Nugaal
Maarso 16, 2016 3:22 b 0
Bacaadweyn, Maarso 16, 2016 (Daljir) —Wararka naga soo gaaraya bariga Gobalka Nugaal ayaa sheegaya in saaka ciidan aad u hubaysan ay dagaal ku qaadeen dagaallamayaashii shalay la wareegay gacan ku haynta deegaan xeebeedka Garmaal oo ka tirsan degmada Dongorayo ee Gobalka Nugaal.
Kooxdan hubaysan ayaa saaka dib uga gurtay deegaanka Garmaal, waxayna gaareen deegaan la yiraahdo SUUJ oo 20-KM waqooyi bari kaga beegaan tuulada Garmaal, waxaana halkaasi sida xogta lagu helayo ka socda dagaal labada dhinaca u dhaxeeya.
Wararka waxay intaasi ku darayaan dagaalka inay ku gacan sarayso dowladda, maadama xalay saqdii dhexe ay halkaasi gaareen ciidan hubaysan iyo gaadiid dagaal.
Docda kale ciidamada ku sugan degmada Godob-jiiraan ayaa saaka howlgal ka bilaabaan halkaasi, warar aan la xaqiijin karin ayaa sheegaya kooxda hubaysan ee deegaankaasi u jirta 40-ka KM ay qorshaynayaan inay isi soo dhiibaan, waxayna u badan yihiin dhalinyaro aan gaarin da’da 30-ka.
Ma jirto war kasoo baxay saraakiisha hoggaaminaya dagaalka ka socda duleedka tuulada Garmaal, shacabka ku nool deeganadaasi ayaa sheegaya inay kooxda cabsi ku abuurtay.
13- ka tirsan Dagaal-yahanada Al-shabaab oo lagu Dilay Garmaal
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Arbaco_16